चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्न कति सजिलो होला ? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्न कति सजिलो होला ?
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २५, सोमबार १०:४४
चीन र ताइवान बीचको तनाव एक पटक फेरी गहिरिएको छ । ताइवानको हवाई क्षेत्रमा चीनको लगातार हस्तक्षेप पछि, अब चीनको शीर्ष नेतृत्वले ताइवानको एकीकरण गर्ने अभिव्यक्ति आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंगले ताइवानको एकीकरण पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। सीले भने, एकीकरण शान्तिपूर्वक हुनु पर्छ, चिनियाँ जनतामा पृथकतावादको विरोध गर्ने महान परम्परा रहेको समेत बताएका छन् । जफमा, ताइवानले आफ्नो भविष्य जनताको हातमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ताइवानका राष्ट्रपति साई इंग वेनले ताइवानले आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाइरहने बताईन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार आइतबार राष्ट्रिय दिवसको र्‍यालीमा साईले भने, हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन जारी राख्नेछौं र हामी हाम्रो आफ्नै सुरक्षा प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन जारी राख्नेछौं ताकि कोहि ताइवानलाई त्यो बाटो पछ्याउन बाध्य नहोस्। चीनले हाम्रा लागि जे बनायो त्यो गर। यसको कारण चीनले प्रस्ताव गरेको कुरा न त ताइवानको लागि स्वतन्त्र छ, नत लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति नै हो, नत यसले हाम्रा २.३ करोड जनतालाई सार्वभौमसत्ता दिन्छ।
ताइवान आफैंलाई एक सार्वभौम राष्ट्र मान्छ
ताइवान आफैंलाई एक सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ, जबकि चीन ताईवानलाई उसको आफ्नै प्रान्त मान्दछ । सन् १९४० को गृहयुद्धको बेला चीन र ताइवान विभाजित भएका थिए । बेइजिंगले यो टापुलाई सहज रुपमा एकीकरणमा नआए बल प्रयोग गर्नबाट बच्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । यो टापुको आफ्नै संविधान र लोकतान्त्रिक निर्वाचित नेताहरु छन्। ताइवानमा तीन लाख सैनिकहरुको सेना छ। जे होस्, अझै पनी केही देशहरु ताइवान लाई मान्यता दिन्छन्। यसको सट्टा, धेरै देशहरु बेइजिंगमा चिनियाँ सरकार लाई मान्यता दिएका छन्। अमेरिकाको ताइवानसंग आधिकारिक सम्बन्ध छैन तर एक कानून पारित गरेको छ जसको तहत यो टापुको सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
ताइवानमा बेइजिंगको शासन स्वीकार गर्न सैन्य र राजनैतिक दबाब बढेको छ र ताइवानमा चिनियाँ लडाकु जेटहरुको बारम्बार प्रवेश अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको बिषय बनेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा चीनले ताइवानको वायु रक्षाको धेरै पटक उल्लंघन गरेको छ र त्यसमाथि रेकर्ड संख्यामा लडाकु विमान पठाएको छ। विश्लेषकहरुका अनुसार उडानहरु ताइवानका राष्ट्रपतिको आइतबारको राष्ट्रिय दिवस भन्दा अगाडि एउटा चेतावनी हो। बेइजिले बल प्रयोग गरेर एकीकरणको सम्भावनालाई पनि इन्कार गरेको छैन। ताइवानका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको पछिल्लो तनाव ४० वर्षयताकै खराब भएको बताएका छन्।
केही विश्लेषक र अधिकारीहरु आगामी केही बर्षहरुमा यो मामला अझ गम्भीर बन्नेछ र अमेरिकासंग चीनको युद्धको संभावना छ। चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले चीनको वायुसेनालाई ताइवान माथिबाट निगरानी गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो पत्रिकाको आग्रह सैन्य माध्यमबाट एकीकरण पूरा गर्नु पर्ने सल्लाह थियो । त्यसको जवाफ ताइवानले आफुमाथि हमला गरे त्यसको प्रत्याक्रमण हुने चेतावनी दिएको थियो । दुबै पक्षका यी कथनहरुको बीच, चीन र ताइवान संग युद्ध स्थगित गर्नको लागी धेरै कारणहरु छन् किनकि यस युद्धमा हजारौं मानिसहरु मर्न सकिन्छ, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुन सक्छ र अमेरिका र यसका सहयोगीहरु संग एक परमाणु संघर्ष पनि हुन सक्छ। न्यूज च्यानल ब्लूमबर्ग बताउँछ कि यी सबै खतराहरु को सट्टा चीन ले ताइवान लाई अन्य माध्यम बाट नियन्त्रण मा राख्न को लागी आफ्नो प्रयास जारी राख्नेछ।
यसमा चीनले सैन्य धम्की, कूटनीतिक अलगाव र आर्थिक प्रोत्साहन मार्फत ताइवान कब्जा गर्नेछ। जे होस्, यो पनि मानिन्छ कि केहि महत्वाकांक्षाहरु चीन को युद्ध तिर धकेल्न सक्छन्। यसमा सबैभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा भनेको आफूलाई सी जिनपिंगलाई प्रमाणित गर्नु हो। सी जिनपिंग गुमेका क्षेत्रहरु फिर्ता लिएर आफ्नो शक्ति प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। प्रोजेक्ट २०४९ इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक इयान ईस्टनले ब्लूमबर्गलाई भने, मेरो चिन्ता छिटो बढ्दैछ कि एउटा ठूलो संकट आउँदैछ। यो कल्पना गर्न सम्भव छ कि सबै आक्रमणको प्रयासहरु महाशक्ति युद्धमा परिणत हुन सक्छ। अबको पाँच देखि १० बर्षहरु अत्यन्त खतरनाक र मौलिक रूपले अस्थिर हुने छन्।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटको गणना अनुसार चीनले ताइवानको तुलनामा आफ्नो सेनामा २५ गुणा बढी खर्च गरेको छ र कागजमा बेइजिंग को सैन्य सन्तुलन धेरै भारी देखिन्छ। मिसाइल देखि लडाकु विमान सम्म हरेक स्तरमा चीनको विशाल धार छ । जसमा परमाणु हतियारहरु छन्, जुन चीनले कहिल्यै उल्लेख गर्दैन।
चीनको लक्ष्य के हो ?
सन् १९११ मा चीनको अन्तिम राजतन्त्र उन्मूलनको ११० औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सी जिनपिंगले शनिबार भने, एकीकरण एक शान्तिपूर्ण तरीकामा हुनुपर्दछ । जुन चिनियाँ राष्ट्र र ताइवानका जनताको पूर्ण हितमा हुनेछ। तर साथसाथै उनले कसैले पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न चिनियाँ जनताको बलियो क्षमता र दृढ संकल्पलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिए । मातृभूमिको पूर्ण एकीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्नु पर्छ सीले भने । चीनले ताइवानमा धेरै तरिकाले आक्रमण गर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो ताइवानको वित्तीय प्रणाली र पूर्वाधार लक्षित आक्रमण गर्न सक्छ । त्यस्तै साइबर र इलेक्ट्रोनिक युद्ध गर्न सक्छ, जसको कारण अमेरिकी उपग्रह ब्यालिस्टिक मिसाइलहरुको बारेमा थाहा छैन।
धेरै विश्लेषकहरुका अनुसार हवाई हमलाको माध्यमबाट ताइवानको शीर्ष राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वलाई निशाना बनाउन सक्छ। चिनियाँ सेनाले धेरै युद्ध अभ्यास गरेको छ। यो संगै, चीनले युद्धपोत र पनडुब्बी को माध्यम बाट ताइवानमा आक्रमण गर्न सक्छ। वास्तवमा, ताइवानमा कुनै पनि आक्रमण खतरनाक हुनेछ किनभने ताइवान सधैं यसको लागि तयार छ।
ताइवान पनि एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता छ । यसको तटरेखा धेरै नराम्रो छ र त्यहाँ मौसम पूर्वानुमान योग्य छैन। त्यहाँ यसको पहाडमा सुरंगहरु छन् कि मुख्य नेताहरुलाई जीवित राख्न र चीनको कुनै पनि आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। ताइवानले आफ्नो सैन्य क्षमता योजना २०१८ मा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा एक मोबाइल मिसाइल प्रणाली पनि थियो, जसको मिसाइलहरु पत्ता लगाई बिना लक्ष्य सम्म पुग्न सक्छन्। सतहबाट हावामा मार हान्न सक्ने मिसाइल र एन्टी एयरक्राफ्ट गनले ताइवान पुग्नु अघि चीनलाई भारी क्षति पुर्‍याउन सक्छ। ताइवान, अर्कोतर्फ, अमेरिका जस्तै विश्व शक्ति को समर्थन पनि छ। चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध १९९६ मा ठप्प भएको थियो, हालैको तनाव भन्दा धेरै पहिले जब चीनले मिसाइल परीक्षणको साथ राष्ट्रपति चुनावमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो लडाकु विमान पठाएर रोकेको थियो ।
ताइवान पनि एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता छ । यसको तटरेखा धेरै नराम्रो छ र त्यहाँ मौसम पूर्वानुमान योग्य छैन। त्यहाँ यसको पहाडमा सुरंगहरु छन् कि मुख्य नेताहरुलाई जीवित राख्न र चीनको कुनै पनि आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। ताइवानले आफ्नो सैन्य क्षमता योजना २०१८ मा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा एक मोबाइल मिसाइल प्रणाली पनि थियो, जसको मिसाइलहरु पत्ता लगाई बिना लक्ष्य सम्म पुग्न सक्छन्। सतहबाट हावामा मार हान्न सक्ने मिसाइल र एन्टी एयरक्राफ्ट गनले ताइवान पुग्नु अघि चीनलाई भारी क्षति पुर्‍याउन सक्छ। ताइवान, अर्कोतर्फ, अमेरिका जस्तै विश्व शक्ति को समर्थन पनि छ। चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध १९९६ मा ठप्प भएको थियो, हालैको तनाव भन्दा धेरै पहिले जब चीनले मिसाइल परीक्षणको साथ राष्ट्रपति चुनावमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो लडाकु विमान पठाएर रोकेको थियो । धेरै पश्चिमी देशहरूले चीनको सैन्य आकांक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले पनि सी जिनपिंग ताइवान सम्झौताको पालना गर्न सहमत भएको बताएका छन्। बिडेनले अमेरिकाको लामो समयदेखि चल्ने एक चीन नीतिको उल्लेख गर्दै थिए, जसअनुसार अमेरिकाले ताइवान बाहेक सबै चीनलाई मान्यता दिन्छ।
ताइवान पनि एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता छ । यसको तटरेखा धेरै नराम्रो छ र त्यहाँ मौसम पूर्वानुमान योग्य छैन। त्यहाँ यसको पहाडमा सुरंगहरु छन् कि मुख्य नेताहरुलाई जीवित राख्न र चीनको कुनै पनि आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। ताइवानले आफ्नो सैन्य क्षमता योजना २०१८ मा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा एक मोबाइल मिसाइल प्रणाली पनि थियो, जसको मिसाइलहरु पत्ता लगाई बिना लक्ष्य सम्म पुग्न सक्छन्। सतहबाट हावामा मार हान्न सक्ने मिसाइल र एन्टी एयरक्राफ्ट गनले ताइवान पुग्नु अघि चीनलाई भारी क्षति पुर्‍याउन सक्छ। ताइवान, अर्कोतर्फ, अमेरिका जस्तै विश्व शक्ति को समर्थन पनि छ। चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध १९९६ मा ठप्प भएको थियो, हालैको तनाव भन्दा धेरै पहिले जब चीनले मिसाइल परीक्षणको साथ राष्ट्रपति चुनावमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको थियो।
त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो लडाकु विमान पठाएर रोकेको थियो । धेरै पश्चिमी देशहरूले चीनको सैन्य आकांक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले पनि सी जिनपिंग ताइवान सम्झौताको पालना गर्न सहमत भएको बताएका छन्। बिडेनले अमेरिकाको लामो समयदेखि चल्ने एक चीन नीतिको उल्लेख गर्दै थिए, जसअनुसार अमेरिकाले ताइवान बाहेक सबै चीनलाई मान्यता दिन्छ। यस सम्झौता अन्तर्गत, अमेरिका ताइवानसंग ठोस अनौपचारिक सम्बन्ध बनाउन सक्छ। ताइवान सम्बन्ध ऐन अन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्छ। यस कानून अन्तर्गत, अमेरिका ताइवानको रक्षामा मद्दत गर्न सक्छ। गत हप्ता बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थायित्व बिगार्ने कुनै पनि कार्यको बिरुद्ध अमेरिका उठेर बोल्ने बताएका थिए। यसबाट यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि ताइवान मा चीन को कब्जा एक सजिलो काम हुने छैन।